UMsunduzi uziqwaqwade amakhanda kumatikuletsheni – Msunduzi News
USUKU obelukade lumenyezelwa lufike lwedlula. Imiphumela yebanga le-12 imenyezelwe kwaqinisekiswa nokuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal senze kahle.
Ethula imiphumela yesifundazwe uMphathiswa Wezemfumdo uMhlonishwa uDlungwane uthe: “Siyajabula ukusho ukuthi sekungokwesithathu kulandelana siphumelela ukukhulisa izinga lokuphasa esifundazweni. Ukuphasa ngowezi-2018 kube ngamaphesenti angama-76.2 okuwukwenyuka ngama-3.3% emiphumeleni yangonyaka wezi-2017.
Ukusebenza kwangowezi-2018 kukhombisa ukuthi njengesifundazwe sinezinhlelo ezidingekayo ezikahle esizoqhubeka siziqinise. Njengoba sihlala sisho sisemgudwini ofanele ngempela. Ngalesi sisekelo esiqinile sihlose ukuzuza amaphesenti angengaphansi kwangama-80 ezinga lokuphasa kulo nyaka,” kusho uDlungwane.
Isifundazwe besinababhalise ngokugcwele abayizi-116 152 kanye nabayizi-13 103 ababhalisele imfundo yabadala i-Adult Education and Training (AET) ababhale ukuhlolwa kwabo okube yisibalo esikhulu ezweni.
Uma kufika emiphumeleni yesifunda uMgungundlovu, uMsunduzi uziqwaqwade emakhanda, ungaqali. Kubafundi abahambe phambili kube nguRechel Rose kanye noNqobile Nzimande. URechel Rose uhambe phambili kuQuintile 5, kanti uNqobile uhambe phambili kulezo zikole ezingaphansi kukaQuintile 2. Abanye kube yilaba; uDlamini Kwandile kuCivil Technology weM.L Sultan PMB, uWood Brett ku-Accounting weMaritzburg College, uNzimande Nonduduzo ku- Agricultural Science wase-Amakholwa Secondary, uKhulasande kuBusiness Studies weHaythorne Secondary, uGovender Leveshan ku-Economics weMaritzburg College, uNzimande Nqobile ku-English FAL, kuMathematics nakuPhysical Sciences weLangsyde, uPiek Jered kuLife Sciences weMaritzburg College, uMazibuko Smanga kuMathematics Literacy weSilver Heights Secondary, uBudhram Abhishek kuGeography weRaisethorp, uZuma Ayanda kuHistory Langsyde, uDlamini Bonginkosi kuHistory Pietermaritzburg Girls High.
Izikole ezenze kahle
Ezikoleni ezenze kahle iMaritzburg College ithole ama-100% kubafundi abangama-244, kanti isithole ama-100% iminyaka emithathu ilandelana. Ezinye zezikole ezithole ama-100% i-Pietermaritzburg Girls High ekubhale abafundi abangama-222 naso esinomlando wokwenza kahle kumatikuletsheni. Yize singawatholanga ama-100% ngonyaka wezi-2017 ngenxa yomfundi oyedwa ongaphumelelanga. Isikole sobuciko iChistlehurst Arts ithole ama-100% kubhale abafundi abayisi-8 kanye neMaritzburg Muslim okubhale abafundi abangama-54.
Inqabakutholwa yomsungulibhizinisi waseMsunduzi
Previous post: Kube yizinyembezi zenjabulo kugogo
Next post: Nawe Elandskop awumncinyane usuveze inkanyezi ngemfundo